သင့်ကိုယ်ပိုင်သဘာဝကြည့်နေသောမင်္ဂလာဆောင်မိတ်ကပ်လုပ်နည်း - အလှတရား
သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစု အခြား #actagainstabuse အပြင်အဆင် မိတ်ကပ် အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန် အစားအသောက် အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှု မိဘအုပ်ထိန်းခြင်း စိတ်ဖိစီးမှု၏
ဒါကြောင့်သင်ဟာကြီးကျယ်တဲ့နေ့၌သင်၏မိတ်ကပ်ကိုဖျက်ရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးသင်၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ Bravo ။ သို့သော်သင်၏မင်္ဂလာဆောင်နေ့မိတ်ကပ်သည်ဓာတ်ပုံများကဲ့သို့တကယ့်ဘ ၀ တွင်ကောင်းမွန်ပုံရရန်သင်မည်သို့သေချာစေသနည်း။ တဖန်ညဉ့်ကိုသင်လတ်ဆတ်သောပုံကိုမည်သို့စောင့်ရှောက်သနည်း။ Pro ကိုမိတ်ကပ်ပညာရှင်နှင့်သတို့သမီးအလှတရားကျွမ်းကျင်သူ Karla Duarte အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များနှင့်အလေ့အကျင့်များမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလမ်းညွှန်သည်
သက်ဆိုင်သော: သင့်ရဲ့သတို့သမီးမိတ်ကပ်နှင့်အတူလုပ်နိုင်သောအမှား 10
2020 တန်ဖိုးရှိအသားတင် priyanka chopra
@ InbaldroOfficial / Getty Images
အဆင့် ၁: ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါ
သင့်လျော်သောစောင့်ရှောက်မှုသည်သော့ချက်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်မိတ်ကပ်မလိမ်းမီသင့်အသားအရေကိုရေဓာတ်ပြည့်ဝအောင်သေချာစေလိုသည်။ 'မနေ့ညကငါအမြဲတမ်းသုံးဖို့အကြံပေးတယ် မျက်နှာဖုံး ခြောက်သွေ့သောအစက်အပြောက်များကိုချောမွေ့စေပြီးသင့်အသားအရေကိုချောမွေ့စေရန်“ Duarte ကပြောကြားသည်။ နံနက်ယံ၌, သင်၏မျက်နှာကိုဆေးကြောခြင်းနှင့်သင့်အသားအရေသို့ moisturizer massage ဖို့အပိုမိနစ်အနည်းငယ်ယူပါ။
ပုံမှန်အရေပြားခြောက်ခြင်းအတွက် - Tatcha Dewy အရေပြား Cream ($ 68) ; ပေါင်းစပ်အရေပြားမှအဆီပြန်ဘို့: တာချာ၏ရေခဲမုန့် ($ 68)
@ WhiteRoseCollective / Instagram ကို @
အဆင့် 2: အခြေစိုက်စခန်း
ထို့နောက်သူကချုပ်အချိန်ပါပဲ။ သငျသညျပုံမှန်အားဖြင့် primer ကိုမသုံးပါရင်တောင်သင်၏မင်္ဂလာဆောင်သောနေ့အတွက်ခြွင်းချက်ပါစေ။ Duarte က“ ကောင်းမွန်တဲ့ primer ကချောချောမွေ့မွေ့မျက်နှာပြင်ကိုဖန်တီးပေးပြီးကျန်သင့်ရဲ့မိတ်ကပ်အတွက်သက်တမ်းရှည်စေမှာပါ။
ပုံမှန်အရေပြားခြောက်ခြင်းအတွက် - နို့မိတ်ကပ် Hydro-Grip Primer (ဒေါ်လာ ၃၀) ; ပေါင်းစပ်အရေပြားမှအဆီပြန်ဘို့: Hourglass Veil Mineral Primer (ဒေါ်လာ ၅၄)
@ Beautini / Instagram
အဆင့် ၃ - ဖောင်ဒေးရှင်း
သဘာဝအရဆုံးအနေဖြင့် Duarte သည်လွှမ်းခြုံမှုအတွက်ပိုမိုပေါ့ပါးသောအရည်ပုံသေနည်းကိုအကြံပြုသည်။ (သင်ဖုံးကွယ်ထားသူနှင့်နောက်မှအမှုန့်များတပ်ဆင်ခြင်းဖြင့်အမြဲတမ်းဖြည့်စွက်နိုင်သည်။ ) လျှောက်လွှာတင်ရန်သင်၏မျက်နှာ၏အလယ်ဗဟို (T-zone တွင်) စတင်၍ ပတ်လည်မီတာများ (သင်၏ဘုရားကျောင်းများ၊ ဆံပင်နှင့်ဂျလိုင်းတစ်လျှောက်) သို့ထွက်သွားပါ။ သူမလည်းသုံးတယ် fluffy ဒြပ်ဖြီး အခြေခံအုတ်မြစ်လျှောက်ထားရန်နှင့်တစ် စိုစွတ်သောရေမြှုပ် အရာအားလုံးကိုရောနှောနေခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးမှတ်စု - သင်၏နားလည်ခြင်းနှင့်အနီရောင်ဖြစ်လေ့ရှိသောအခြေခံအုတ်မြစ်အချို့ကိုသင်၏လည်ပင်းနှင့်လည်ချောင်းနာအောက်ပိုင်းသို့ချထားရန်မမေ့ပါနှင့်။
ပုံမှန်အရေပြားခြောက်ခြင်းအတွက် - Armani Luminous ပိုးဖောင်ဒေးရှင်း (ဒေါ်လာ ၆၄) ; ပေါင်းစပ်အရေပြားမှအဆီပြန်ဘို့: Dior Diorskin Airflash ရေမှုတ်ဆေးဖောင်ဒေးရှင်း (ဒေါ်လာ ၆၂)
သောမတ်စ် Concordia / Getty Images
အဆင့် 4: ဖုံးကွယ်
လူတွေကalerရာမတြိဂံဖုံးကွယ်ထားသည့်တြိဂံများကိုသူတို့၏မျက်နှာများပေါ်ဆွဲတင်ပေးသည့်ထိုသင်ခန်းစာများကိုသင်သိပါသလား။ ဒီတစ်ခါလည်းသင်၏မင်္ဂလာဆောင်နေ့၌ထိုသို့မပွုပါ။ လူအများစုအတွက်မျက်လုံးအောက်၊ နှာခေါင်းနှင့်အပြစ်အနာအဆာများအောက်တွင်ရှိသောသင်လိုအပ်သည့်နေရာတွင်သာအသုံးပြုပါ။ ကိရိယာများအတွက် - 'က သေးငယ်တဲ့အမိုးခုံးဖြီး ဤဒေသများအတွက်စီမံခန့်ခွဲရန်အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်ပြီး, နောက်တဖန်, ငါသည်အစဉ်အမြဲသုံးပြီးအနားထွက်ရိုက်ကူး ရေမြှုပ်တစ်ချောင်း Duarte ကပြောပါတယ်။
ပုံမှန်အရေပြားခြောက်ခြင်းအတွက် - Armani ပါဝါထည်ဖြင့်ဆွဲနိုင်သော Concealer ($ 34) ; ပေါင်းစပ်အရေပြားမှအဆီပြန်ဘို့: Tarte တိပ်ခွေ Concealer ($ 27)
@ MarchesaFashion / Instagram
အဆင့် ၅: ပုံ
ဒူးဝါ့တ်က 'ကွန်တိန်နာအတွက်ခရင်မ် (သို့) အရည်သုံးတာကိုပိုနှစ်သက်တယ်။ သင်၏သဘာဝအသားအရေထက်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောအရိပ်နှစ်ခုထက်မပိုပါနှင့်၊ သင်၏ဆံပင်ပုံစံမှသင်၏ပါးပြင်သို့သုတ်လိမ်းသည့်နံပါတ် '၃' ဖြင့်လျှောက်ပြီးသင်၏ jawline တွင်အဆုံးသတ်ပါ။ 'ငါကပိုပြီးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဖို့နှာခေါင်းတစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာပုံအနည်းငယ်ထည့်ချင်တယ်။ ' ရောနှောပေါင်းစပ်ပြီးတော့အချို့သောပိုပြီးရောနှောနေခြင်း။
ကြည့်ပါ စစ်မှန်သောနည်းပညာများ Brush ပြုလုပ်ရန် ($ 8) ; Charlotte Tilbury ဟောလိဝုဒ်ပုံလှိုင်း ($ 38)
Flashbulbs (သို့မဟုတ်တစ်ညလုံးမှေးမှိန်ခြင်း) မှဆေးကြောခြင်းမခံရသည့် Photogenic flush အတွက် Duarte သည်အပေါ်ယံမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအလားတူအရိပ်ထဲတွင်မုန့်မျက်နှာပြင်နှင့်အမှုန့်မျက်နှာပြင်များကိုအလွှာများအလွှာဖြင့်အလွှာများအလွှာအလွှာတွင်ဖုံးအုပ်ထားသည်။ ပါး၏ပန်းသီးအပေါ်တွင်သာအရောင်တင်ပြီးရုတ်သိမ်းခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖန်တီးရန်ပါးပြင်ပေါ်တွင်အနည်းငယ်ပိုမြင့်သည်။
အသွင်အပြင်ကိုကြည့်ပါ - Makeup Forever Ultra HD Blush ($ 26)
@AlexandraGrecco / Instagram
အဆင့် ၇: မီးမောင်းထိုးပြ
“ သတို့သမီးတွေအတွက်အကြိုက်ဆုံးမီးမောင်းထိုးပြပေးတာကမုန့်ဖော်စပ်ပုံပါ။ သူတို့ဟာတောက်ပတဲ့အချောကိုချန်ထားမယ့်အစားသင့်အသားအရေပေါ်မှာကောင်းမွန်တဲ့ရောင်ခြည်ကိုဖန်တီးပေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သင်၏လက်ထိပ်ဖျား၊ သင်၏ပါးပြင်ထိပ်များ၊ Cupid ၏လေး၊ နဖူးရိုးအရိုးများနှင့်နှာခေါင်းတံတားပေါ်သို့ဆွဲချရန်သင်၏လက်ချောင်းထိပ်ကိုအလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်သည်။ အပိုတောက်ပမှုအတွက်သင်၏ပါးနင့်အရိုးများကိုဒုတိယအဆင့်မြင့်မီးလုံးတစ်ချောင်းဖြင့်တင်ပါ။
မည်သည့်အသားအရေအတွက်မဆို Charlotte Tilbury ဟောလိဝုဒ်အလှအပအလင်း Wand ($ 38) ; BECCA အရေခွံမတ်ေတာ Glaze တုတ် ($ 28)
အဆင့် ၈: မျက်လုံး
'အခြားမည်သည့်အဆင့်ထက်မဆိုမျက်လုံးမိတ်ကပ်သည်ကိုယ်ပိုင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ တချို့လူတွေကကြည့်ရတာအရမ်းအံ့သြစရာကောင်းတယ်၊ သူကတခြားသူတွေကကြောင်လေးကိုလိုချင်တာပဲ။ ယေဘုယျအားဖြင့်တော့သတို့သမီးအများစုသည်နူးညံ့သောအသံများဖြင့်နူးညံ့သော၊ ၎င်းကိုအဆင့်သုံးဆင့်ဖြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
မျက်လုံးအရိပ် အားလုံးအဖုံးကျော်ရှမ်ပိန်သို့မဟုတ်အလင်းပန်းရောင်အရိပ်၏လက်ဆေးထည့်ပါ။ ထို့နောက်သင်၏မျက်လုံးများနှင့်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောအညိုရောင်အရိပ်ကိုသင်၏တွားသွားသတ္တဝါတစ်လျှောက်တွယ်ကပ်နေသည့်အညိုရောင်အရိပ်ကိုအသုံးပြုပါ။ သင်၏အဖုံး၏အလယ်တွင်ရှိသည့်တောက်ပသောအလင်းရောင်နှင့်အတူပြီးအောင် (သင်မျက်တောင်ခတ်သည့်အခါနှင့်ဓာတ်ပုံများတွင်အလင်းကိုဖမ်းယူပါလိမ့်မည်) ။
မျက်တောင် နောက်ဆုံးအနေနဲ့အနည်းဆုံးတော့မှားယွင်းတဲ့ကြိမ်လုံးတစ်ချောင်းချင်းစီကိုသင့်မျက်လုံးရဲ့အပြင်ဘက်ကိုသုံးပြီးအမှန်တကယ်ပွင့်အောင်လုပ်ပါ။ ထို့နောက်အရာအားလုံးကိုရေစိုခံ Mascara ဖြင့်တံဆိပ်ခတ်ပါ။
ကြည့်ပါ ကိုကာကိုလာ Mirage နှင့် Nude Dip တို့တွင် Tom Ford Eye Colour Quad (ဒေါ်လာ ၈၈)၊ Hourglass Scatted Light Glitter Eye Shadow ($ 29) ; Brownie၊ Blacquer နှင့် Rococoa ရှိ Marc Jacobs Highlner (ဒေါ်လာ ၂၅) ; Tarte အတုနိုးထ Eye Highlight (ဒေါ်လာ ၂၀) ; Kiss Lashes ($ 7) ; Lancome မုတ်ဆိတ်ရေစိုခံနိုင်သည့် Mascara (ဒေါ်လာ ၂၅)
အဆင့် 9: Brows
ဒူအာတေးက“ ပန်းတိုင်ကအမွေးထူပြီးသဘာဝနဖူးပဲ။ ဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်သည်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောအကြံဥာဏ်ရရှိရန်နဖူးများကိုဖွင့်ခြင်းဖြင့်စတင်ပါ။ ထို့နောက်ဆံပင်ပုံစံတစ်မျိုးတည်းကိုဆွဲရန်ခဲတံဖြင့်ဝင်ပါ။ ပြီးပြီဆိုလျှင်အရာဝတ္ထုအားလုံးကိုရှင်းလင်းသောနဖူးဂျယ်လ်ဖြင့်ထားပါ။ သင်နောက်ထပ်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လိုပါကအနားများကိုသန့်ရှင်းစေရန်အနည်းငယ်သောဖုံးအုပ်ထားပါ။
ကြည့်ပါ Mac Shape + Shade Brow Tint (ဒေါ်လာ ၂၂)၊ Diorshow Brow Styler (ဒေါ်လာ ၂၉)၊ Anastasia Beverly Hills Clear Brow Gel (ဒေါ်လာ ၂၂)
အဆင့် 10: နှုတ်ခမ်း
သင်၏နှုတ်ခမ်းများသို့ရောက်သောအခါ၎င်းသည်မျှတမှုရှိသည်။ ကျန်တဲ့မိတ်ကပ်တွေကိုမလွှမ်းမိုးဘဲနဲ့သင့်မျက်နှာကိုတောက်ပစေမယ့်အရိပ်ကိုလိုချင်တယ်။ Duarte သည်သင်၏နှုတ်ခမ်းကိုအစိုဓာတ်ထိန်းခရင်မ်ဖြင့်ကုသရန်အကြံပေးသည်။ မိနစ်အနည်းငယ်မျှနစ်မြှုပ်ထားပါ၊ သင်၏ pout ကိုတန်းစီရန်အသားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောခဲတံကိုအသာပုတ်။ ကပ်ပါ။ နောက်နှုတ်ခမ်းနီနှင့်နောက်ဆုံးထိတွေ့မှုသည်သင်၏အောက်နှုတ်ခမ်း၏အလယ်တွင်အနည်းငယ်တောက်ပနေသည်။
ကြည့်ပါ။ Laneige Lip Sleeping Mask ($ 14); 'Pillow Talk' (ဒေါ်လာ ၂၂) တွင် Charlotte Tilbury နှုတ်ခမ်း Cheat Lip Liner ; NARS Velvet Matte နှုတ်ခမ်းနီကို Bad Girl၊ 'Me Me Home' နှင့် 'Good Times' (ဒေါ်လာ ၂၇ ဒေါ်လာ) ဖြင့်ဝယ်သည် ); 'Marc Deck' နှင့် 'Love Drunk' တွင် Marc Jacobs အမြင့်ဆုံး Shine Lip ယွန်းကိုအလှဆင်ခဲ့သည်
အဆင့် 11: သတ်မှတ်မည်
“ သတို့သမီးအများစုအတွက်မင်းရဲ့မိတ်ကပ်ကို T-zone တစ်လျှောက်နဲ့သင့်နှာခေါင်းအနားမှာသာထားရှိမည်။ အကယ်၍ သင်အမှန်တကယ်အဆီပြန်နေလျှင်နဖူးများအကြား၊ မျက်လုံးအောက်နှင့်ပါးစပ်တစ်ဝိုက်ရှိထိတွေ့မှုကိုထည့်ပါ။ သင်ဘာပဲလုပ်လုပ်သင့်မျက်နှာ၏အစွန်အဖျား (သင် highlighter ကိုအသုံးပြုသည့်နေရာတိုင်းတွင်) ကိုတစ်ကိုယ်တည်းထားခဲ့ပါ၊ ထို့ကြောင့်သင်တောက်ပနေသောအဆုံးကိုထားရှိမည် 'ဟု Duarte ကအကြံပေးသည်။ သင်၏မိတ်ကပ်အားလုံးအားညလုံးပေါက်သော့ခတ်နိုင်ရန်အတွက်စာရင်းရေးသွင်းထားသောအမှုန်များစာရင်းဖြင့်အဆုံးသတ်ပါ။
ပုံမှန်အရေပြားခြောက်ခြင်းအတွက် - Hourglass Veil Translucent Setting Powder (ဒေါ်လာ ၄၆)၊ ပေါင်းစပ်အရေပြားမှအဆီပြန်ဘို့: Huda အလှအပလွယ်ကူသောမုန့်ဖုတ်ချိန်ညှိမှုန့် ($ 34); Skindinavia သတို့သမီးလောင်းသောရေမှုန်ရေမွှား ($ 26)
@ InbaldroOfficial / Instagram
အဆင့် 12: အပိုငွေချေး
နောက်ဆုံးအဆင့်လား။ သင်၏ပခုံးထိပ်များ၊ လက်မောင်းများ၊ décolletageနှင့်ကော်လာအရိုးများပေါ်ရှိတောက်ပသောဆီမွှေးအလွှာတစ်ခု။ သင်၏အဝတ်အစားထဲသို့မချမီအရာအားလုံးကိုခြောက်သွေ့စေရန်မိနစ်အနည်းငယ်ပေးပါ။
ကြည့်ပါ Charlotte Tilbury စူပါမော်ဒယ်လ် (ဒေါ်လာ ၆၅)
သက်ဆိုင်သော: သူတို့ရဲ့အကြီးမားဆုံးဆံပင်နှင့်မိတ်ကပ်နောင်တအပေါ်7သတို့သမီး
Categories အခြား ခေတ်ရေစီးကြောင်း စီမံကိန်း & အကြံဥာဏ်
Jon-Michael Ecker ကားမည်သူနည်း ('Firefly Lane' ရှိ AKA Max)? သူကအကျွမ်းတဝင်ကြည့်အဘယ်ကြောင့်ဒီနေရာကိုပါပဲ
20 သင်၏မီးဖိုချောင်ကိုပြောင်းလဲစေမည့် Pantry Organizations Hacks
ကလေးငယ်များအတွက်အကောင်းဆုံး (နှင့်ကြောက်စရာမဟုတ်) ရုပ်ရှင် ၂၀
မာဂရီးတာအားအိမ်လုပ်လုပ်ရန်စုစုပေါင်း Pro လိုလုပ်နည်း
ကိုယ်ခန္ဓာအမျိုးအစားတိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးမင်္ဂလာဆောင် Guest ည့်သည်ဝတ်စုံများ
Shonda Rhimes ရဲ့ပိုက်ကွန်ကဘာလဲ? ဒါဟာကျနော်တို့စိတ်ကူးထက် Way ကိုပိုမိုအထင်ကြီးစရာပါပဲ
မင်္ဂလာဆောင်ကိုဒေါ်လာ ၁၀,၀၀၀ အတွက်ဘယ်လိုစီစဉ်ရမလဲ။
Congee ရုတ်တရက်နယူးယောက်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးဟင်း။ ဤတွင်ဒါဟာစားရန်အဘယ်မှာရှိပါပဲ
13 ဓာတ်မတည် - ဖော်ရွေဟယ်လိုဝင်းသကြားလုံးရွေးချယ်စရာ
၃၀ မိနစ် (သို့) ဒီထက်နည်းဖြင့်သင်လုပ်နိုင်သည့် gluten-free ညစာစားပွဲ
ဒီတရားမဝင်အိမ်ခရီးစဉ်နှင့်အတူ Kelly Ripa ရဲ့နေအိမ် (s) ကိုအတွင်းပိုင်းတစ် Peek ယူပါ
Billie အားလပ်ရက်ကနေ Michelle Obama အထိကျွန်ုပ်တို့အကြိုက်ဆုံးအနက်ရောင်ဖက်ရှင်အမှတ်တံဆိပ် ၂၇ ခု
#OnOurRadar - ဒီလရဲ့ပူပြင်းတဲ့အသစ်စက်စက်ပွဲများ
သင်ဖြစ်ကောင်း Joanna Gain အကြောင်းကိုမသိခဲ့ပါအရာ 10
'ခွန်အား' ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသောလှပသောကလေးအမည် ၁၅ ခု
ချစ်ခြင်းမေတ္တာက Valentine's နေ့ကိုကိုးကား
ဆောင်းရာသီတွင် dandruff အတွက်အိမ်သုံးဆေးများ